हाम्राे गाउँ घरमै सजिलै पाइने लट्टे सागमा पाइन्छ यस्ताे भिटामिन–Samacharpati
काठमान्डाैँ, ३१ वैशाख । रोप्न नपर्ने, बारीमा जताततै आफैँ उम्रने । एक ठाउँ मात्र होइन, पहाडदेखि तराईसम्म पाइन्छ । पकाउन सजिलो, खाँदा स्वादिलो, स्वास्थ्यका लागि पोषिलो साग हाे लट्टे
के पाइन्छ लट्टेमा !
कसरी पकाउने !
कहाँ पाइन्छ लट्टे !
कहिले पाइन्छ !
लट्टेको साग चैत्र वैशाखको महिनामा पाइन्छ । यो सिजनमा खेतबारीमा आफैँ उम्रिन्छ । रोप्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।